Mamiriro ekunze asina kujairika muna Chivabvu-2021 akakanganisa mamiriro ezvirimwa kumatunhu eRussia - "Potato System" magazini
May apfuura akazoita seasipo kumatunhu mazhinji eRussia. Kune akati wandei, kwaipisa zvisingaite: mweya wakadziya kusvika + 35 madigiri uye pamusoro, marekodhi mazhinji emuno tembiricha akaputswa. Panguva imwecheteyo, kumwe kunhu kupisa kwaiperekedzwa nekusanaya kwemvura, asi kwete kwese kwese. Zvirimwa zvematura makuru emunyika - matunhu ekumaodzanyemba neCentral Black Earth Dunhu - anogona kutambura nemasora nezvirwere nekuda kwekunaya kwakanyanya muna Chivabvu, kazhinji zvichidarika mwero wepagore. Nyanzvi dzekambani yaNyamavhuvhu pamwe nemarabhoritari ayo ekuongorora zvekurima vakaongorora njodzi idzo dzakaunzwa kuvarimi vekumba mwedzi wapera wegore risinganetsi wa2021
Dunhu reRostov muna2020 rakava dunhu rakapaza rekodhi rezviyo muRussia, uye gore rino rinogona kuchengetedza chinzvimbo ichi. Sekureva kwaTatyana Novikova, agronomist weAgroanalysis-Don murabhoritari muguta reAzov, Rostov region, anoti, Chivabvu mudunhu iri kwaisanyanya kupisa zvisina mwero: mwedzi nehafu mvura yanaya, uye tembiricha yakaramba iri pazasi peavhareji.
“Kuvandudzwa kwegorosi remuchando kuri kuenderera mberi zvakajairika, rakarasa nzeve uye panguva ino, mune dzimwe nzvimbo dzemudunhu iri, rapinda muchikamu chekuzadza nzeve. Kune hunyoro hwakakwana hwezvirimwa, uye zvinogona kutofungidzirwa kuti goho mudunhu medu rinogona kunge rakakwirira kudarika rakaoma ra2020, ”Nyanzvi inotenda.
Mvura iri munharaunda yeRostov yakaomesa mamiriro ezvinhu nezvirimwa zvemuchirimo: semuenzaniso, mumapurazi mazhinji kutanga kwaJune, sunflower yakanga isati yadyarwa, nepo mushandirapamwe wekudyara mudunhu, sekutonga, wakapedzwa zvizere naMay. 10 kumatunhu ekumaodzanyemba uye naMay 20 kumatunhu ekuchamhembe. ... Iyo lag inoonekwawo pakati pevarimi vemiriwo: saka, kazhinji pakupera kwaMay, mbatatisi dzekutanga dzave kutocherwa mudunhu, asi muna 2021 panguva iyoyo yanga ichingosvika padanho rekutangisa uye yanga yakanyanya kukohwa. Mimwe miriwo muvhu rakavhurika zvakare inokura uye kuibva zvishoma nezvishoma: izvi zvinoratidza, kutanga kwezvose, kuti nguva yekukohwa kwavo inochinja zvishoma. Nekudaro, maererano nehuwandu hwenongedzo, gohwo fungidziro yezvirimwa zvemiriwo zvakare inofadza.
“Panguva imwecheteyo, zvakakosha kuti tizive kuti nekuda kwekugara kuchinaya mvura, varimi vazhinji vekurima vakatadza kuita mishonga yesora nenguva, uye izvi zvinogona kuwedzera dambudziko nemasora. Pamusoro pezvo, kana munaChikumi humidity uye tembiricha zvichiramba zvakada kufanana naMay, zvinozodikanwa kungwarira kuputika kwezvirwere zvemabhakitiriya nemafungi, ”anonyevera Tatiana Novikova.
Saiye mukuru weiyo Agroanalysis Center rabhoritari muguta reGryazi, Lipetsk dunhu, Vyacheslav Krasin, inotaura kuti zvirimwa zvechando muCentral Chernozem nharaunda, nekuda kwekutonhora kwaApril uye mazaya echando akaumbwa muminda, akafuratira zvisina kunaka, uye ikozvino mazhinji idzo dzinenge dzakatodyarwa nezviyo zvegorosi nebhari, kana kudyarwa nezvirimwa zvemaindasitiri ... Panguva imwecheteyo, varimi vanotarisira kuti zvakashata zvapera.
“Kupisa kwakadzikama pakati pechipiri nerechitatu mazuva aMay kwakafarira kukurumidza kukura kwezvirimwa zvegorosi zvechando zvakasiiwa. Ikozvino zvakakosha kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemiti, sezvo pasina hunyoro hwekushomeka, iyo yaigoneswa nekuwanda kwemvura muna Chivabvu, anodaro Vyacheslav Krasin. - Nezvirimwa zvemuchirimo, mamiriro ari kusimukira chaizvo - nekuda kwekuwedzera kwetembiricha uye hunyoro hwevhu. Kukudziridzwa kwegorosi nebhari kuri kukurumidza zvikuru, kunyanya mumapurazi aya akachengeta chikafu chakakwana uye kudzivirira kubva kumasora. Panguva imwecheteyo, paweekend yekupedzisira yaMay husiku, tembiricha yemhepo yakadzika kusvika ku +6 degrees pamwe chete nekunaya, saka varimi vava kuda kunyatsoongorora tupukanana nezvirwere. Nezvedu, isu tiri kuyedza kuvabatsira mune izvi ”.
"Kwaitonhorera chaizvo kumaodzanyemba chitubu ichi chose," inopfupisa musoro wedhipatimendi rekuvandudza zvigadzirwa zvekambani ya "Nyamavhuvhu" Dmitry Belov. Kana iri yeCentral Russia, kunyangwe ichidziya mamiriro ekunze, nekuda kwehuwandu hwakawanda hwekunaya, tinoona "kuzvimba" minda muKursk, Belgorod, Orel matunhu. "Izvi zvinonetsa kugadzirisa minda nezvirimwa zvinodzivirira zvirimwa uye fetiraiza nefetiraiza."
Mamiriro ezvinhu akafanana akaitika muStavropol Territory uye muKuban, nyanzvi yakati: zvirimwa zviri kuwanda, uye maagrari havana nguva yekuvadzivirira pasati papera chikamu. Panguva imwecheteyo, dzimwe nzvimbo dzinoverengeka (semuenzaniso, Samara dunhu, matunhu eVolga nharaunda) dzakakanganiswa nekupisa kwakanyanya uye kushomeka kwemvura zhinji. Zvirimwa pano zvakasangana nekushushikana kwemweya, zvimwe zvacho zvakagamuchirwa nekupisa.
“Kazhinji, muna 2021 mamiriro ekunze muRussia ainakidza uye akasiyana. Chinhu chekudziya kwakanyanya chakazviratidza zvakasiyana kumatunhu akasiyana, kupisa kwakasarudzika kwaisawanzo kuperekedzwa nekusanaya kwemvura, uye varimi vematura makuru emunyika vane hanya nemwaka uno kwete nekushomeka kwehunyoro, asi nekwanisi yekudzivirira nekuchengetedza goho ine simba guru, ”anodaro Dmitry Belov.
Source: Press basa rekambani "Nyamavhuvhu"